LA OGAADAY: Hadalladii WAALLIDA Ahaa Ee Ronald Koeman Ku Yidhi Messi Oo Soo Baxay & Sababtan Darteed Oo Uu Kooxda Uga Tegayo - Gool24.Net
LA OGAADAY: Hadalladii WAALLIDA Ahaa Ee Ronald Koeman Ku Yidhi Messi Oo Soo Baxay & Sababtan Darteed Oo Uu Kooxda Uga Tegayo
Lionel Messi ayaa la sheegay inuu go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa Barcelona isla markaana uu si rasmi ah ugu dhawaaqi doono toddobaadkan gudihiisa, kaas oo salka ku haya niyad-jab uu ka qaaday bandhiggii kooxda, khilaaf u dhexeeya ciyaartoyda iyo maamulka iyo culays shaqsi ah oo uu dareemayo.
Laacibkan ayaa meel adag istaagay markii ay toddobaadkii hore kulmeen tababaraha cusub ee Barcelona ee Ronald Koeman, waxaanu u sheegay inuu fursadaha uu kaga tegi karayo naadigu ay ka badan yihiin kuwa uu kusii joogi karayo.
Warbaahinta ayaa muddo raadinaysay hadalladii ay isweydaarsadeen Lionel Messi iyo Ronald Koeman, waxaana ugu dambayn lasoo helay kelmado layaab leh oo aan meesha qabanin oo macallinka cusub uu isku dayay inuu ku cabsi geliyo Leo, kuwaas oo keenay in xiddiga reer Argentina uu ka fikiro mustaqbalkiisa.
Kulankan oo dhacay maalintii uu Lionel Messi sida degdeg ah uga soo laabtay fasax uu qoyskiisa la qaadanayay, tababare Koeman na uu ahaa qofka ka dalbaday inuu kusoo laabto Barcelona, ayaa bannaanka la keenay hadallo hanjabaad ah oo uu tababaraha reer Netherlands ku yidhi Messi.
Sida ay sheegtay warbaahinta Deportes Cuatro, intii uu kulankaasi socday ayay Koeman iyo Messi hadallo xanaf leh oo aad u kala fog is weydaarsadeen, waxaana si xun u hadlayay tababaraha.
Koeman ayaa u sheegay Messi in aanu ka sugin wax naxariis iyo dabacsanaan ah, isla markaana ay dhimatay sharaftii kooxda oo ciyaartoydani, sidaas darteedna uu u diyaar garoobo in wax walba uu u qabto naadiga, taas oo keentay in Messi uu aad uga cadhoodo.
Sida ay sheegtay Deportes Cuatro, Ronald Koeman ayaa ku yidhi Messi: “Sharaftii kooxdan way u dhamaatay, waa inaad wax walba u qabato naadiga. Anigu ma ihi qof dabacsanaan leh; waxa waajib kugu ah inaad ka fikirto kooxdan oo kaliya.”
Lionel Messi ayaa tababare Koeman u arkay inuu yahay kalitaliye doonaya inuu socodsiiyo waxyaabo aan suurtogal ahayn, isla markaana aanu la shaqayn karayn oo ay tahay inuu iskaga tago kooxda, maadaama aanu ixtiraam u muujin, sidoo kalena uu isaga saarayo culays iyo canaan, iyadoo aanu ka garaabin sida uu naftiisa ugu soo huray kooxda ee ay kalidii ugu tiirsanayn.
Tababare Ronald Koeman ayaa kulanka Messi kaddib, waxa uu telefoonka kula xidhiidhay Luis Suarez oo ay aad iskugu dhow yihiin xiddiga reer Argentine, saaxiibtinimo weyna ka dhaxayso, waxaanu u sheegay inuu fasax yahay oo uu raadsado koox uu u ciyaaro. Sidaas oo kale, waxa uu iyagana telefoonka ka fasaxay Arturo Vidal, Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti.